लाम्मेलामा जेष्ठ मेला सम्पन्न, गाउँका हर समस्याहरुमा सहयोग गर्ने देवी भट्टचनको प्रतिवद्धता ! – ebaglung.com
लाम्मेलामा जेष्ठ मेला सम्पन्न, गाउँका हर समस्याहरुमा सहयोग गर्ने देवी भट्टचनको प्रतिवद्धता !
२०७५ जेष्ठ १३, आईतवार १२:३७	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
योगेन्द्र बिश्वकर्मा ,बुर्तिबाङ २०७५ जेठ १३ । तमान खोला गाउँपालिकाको लाम्मेलामा शोले युवा क्लबले आयोजना गरेको जेष्ठ मेला भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ । मेला गत जेठ १ गते सुरु भएको थियो ।
मेलाको समापन समारोहमा प्रमुख अतिथीको रुपमा भाग लिन प्रभु बैँकका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन, अन्य अतिथीहरुमा थकाली समाज काठमाडौका क्षेत्रिय अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टचन, समाजसेवी ताराप्रसाद भट्टचन, निर्गुन भट्टचन काठमाडौबाट हेलिकप्टरमा लाम्मेला आउने भन्ने पूर्व सूचना पाएका स्थानीयहरु ठुलो संख्यामा भेला भएका स्थानीयहरुले अतिथीहरुको भव्य स्वागत गरेका थिए ।
त्यस अवसरमा यसै लाम्मेलामा जन्मे हुर्केका देवी प्रकाश भट्ट्चन लगायत अन्य अतिथीहरुलाई संगैका दौतरीले अङ्कमाल गरेर आत्मियता जनाए भने कतिपयले हाम्रो राजा भन्दै भोकमरी पर्दा खर्च भरिदिने भगवान भनेर खुट्टा ढोगेको दृश्य पनि देखियो ।
समापन कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथी एवं प्रभु बैँकका अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले यस गाउँमा पर्ने जस्तोसुकै समस्यामा पनि सहयोग गर्न पछी नपर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
अतिथीहरुलाई फर्किने मौकामा स्थानीयले लाम्मेलामा उत्पादित आलु र चोयाँका डोका डाला डालीहरु मायाँको चिनोको रुपमा उपहार दिएको थिए ।
एघार दिन सम्म सन्चालित जेष्ठ मेलाको उद्घाटन तमानखोला गाउपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले गरेका थिए ।
कार्यक्रम पुरुष भलिबल तर्फ २७ टीमको सहभागितामा रहेको थियो भने न्यु शोले स्पोस्र्ट क्लब छापखानी म्याग्दी प्रथम र व्दितिय दीपज्योति युवा क्लब खुङ्खानी बागलुङ बनेको थियो । दीपज्योति युवा क्लब खुङखानीका याम सिर्पाली उटकृष्ट खेलाडँी घोषित भएका थिए ।
महिला भलिबल तर्फ ६ टीमको सहमागिता रहेको थियो जस्मा दीप ज्योति महिला क्लब बागलुङ प्रथम र दुरदर्शन मुनज्योति महिला क्लब पात्ले म्याग्दी व्दितिय बनेको थियो । दुरदर्शन मुनज्योति महिला क्लबकी शर्मिला पुन उटकृष्ट खेलाडँी घोषित भएकी थिईन् ।
७ टीमको सहभागिता रहेको ताराखेल प्रतियोगितामा तमान युवा क्लब प्रथम र समाज सुधार युवा क्लब ढोरपाटन नगरपालिका वडा न.४ व्दितिय भएको थियो । तमान युवा क्लबका थमकुमार रोका ताराखेलका उटकृष्ट खेलाडी घोषित भएका थिए ।
पुरुष रस्सा कस्सा प्रतियोगितमा तमान युवा क्लब तमान प्रथम र व्दितिय स्थान आयोेजकले हात पारेको थियो भने महिला रस्सा कस्सा प्रतियोगितमा गाउटोल आमा समुह प्रथम गार्दी आमा समुह व्दितिय भएका थिए ।
दोहोरी गीत प्रतियो गितामा प्रथम सरोज छन्त्यालको समुह र होम बहादुर बुढाको समुह दोश्रो बनेका थिए त्यस्तै घैँटोफोर प्रतियोगीतामा सुदप पटेल म्याग्दी प्रथम, छेलो फ्याकने प्रतियोगितामा भरत श्रीपाली प्रथम काजु हर्मेल व्दितिय भएका थिए भने महिला तर्फ लिला छन्त्याल प्रथम सिर्जना छन्त्याल द्धितिय भएका थिए ।
कार्यक्रममा चर्चित कलाकार कूष्ण क्षेत्री सम्झना थापा मगर र स्थानिय कलाकारहरुले मेला अबधिचर दर्शकलाई सांगीतिक प्रतुतिमार्फत मनोरञ्जन दिएका थिए। जेष्ठ मेला दश हजार बढि दर्शकले अबलोकल गरेको मेला संयोजक खिम छन्त्यालले जानकारी दिए ।
बागलुङ र म्याग्दी जिल्लाको सिमानामा रहेको शोले डाँडाको काखमा अबस्थित लाम्मेला गाउँ आलुखेती र चोयाँको सामाग्रीका लागि निकै प्रशिद्ध मानिन्छ ।
गल्कोट स्थित बिद्युत प्राधिकरणको नो लाईट कार्यालयमा तालाबन्दी, प्रहरीव्दारा एक सेवाग्राही पक्राउ !
तमानखोलामा चालु आवको १० महिनामा ८० प्रतिशत निर्माणकार्य सम्पन्न- अध्यक्ष बुढा